Dhaqaaq iPhoto Library: Sida loo dhaqaaq iPhoto Library in a New Location / Computer
Sida loo dhaqaaq iPhoto Library in a New Location / Computer
iPhoto waa qayb ka mid ah iLife Suite codsiga software, taas oo keliya ma kaa caawinaysaa in aad abaabulo iyo xaalkaa photos aad, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho dheeraad ah oo ka soo sawiradan adigoo buugaagta sawir, kaararka Salaan iyo soo duubey. doonistiisa iPhoto abuuraa ah folder iPhoto Library ama xirmo in ku jira sawiro laga keeno iyo wax kasta oo albums aad ku daray isticmaalaya iPhoto.
Haddii aad rabto inaad u guurto iPhoto Library meel cusub ama computer cusub, waa in aad u guurto ah iPhoto Library folder oo dhan ama xirmo oo markaas loo ogaado in ay meesha cusub ee iPhoto.
Hadda aad rabto in aad u guurto iPhoto Library meel cusub ee drive gudaha ee computer Mac (oo daacad ah, anigu ma garanayo sababta, laga yaabee in aad rabto in aad kaliya). Xaaladaha kale waxaa ka mid ah in aad u baahato drive adag ee Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah) ay sabab u tahay photos xal sare qaaday camera, ama uun aad iibsatay ah Mac computer cusub (Mac OS X 10.11 ka mid ah). Waa hagaag, aad u aragto sida ay u guuraan iPhoto Library meel cusub ama your computer cusub (isticmaalaya drive dibadda adag). Xalku waa mid aad la mid ah.
1. Exit iPhoto haddii furan.
2. Fur aad Pictures folder oo dooro Library iPhoto .
3a.For meel cusub: Ku jiid ah folder iPhoto Library ama xirmo si ay goob cusub.
3b.For computer cusub: Isku drive adag aad dibadda kaas oo soo bandhigi doonaa Finder. Jiid ah folder iPhoto Library ama xirmo si drive dibadda adag.
4. Hadda fur iPhoto (computer cusub loogu socon iPhoto Library in computer cusub). Ku hay hoos u muhiim ah Option on keyboard ah, iyo sii muhiim ah Option qabtay ilaa ay kuu soo baxdo si ay u abuuraan ama dooran maktabadda iPhoto ah.
5. Riix Dooro Library .
6. Hel dooro Library iPhoto aad u dhaqaaqay in tallaabada 3.
7. Haddaba waad arki doontaa sawirada ee iPhoto Library cusub ama iPhoto Library computer cusub ee.
8. Delete ku iPhoto Library asalka ah haddii loo baahdo.
9. U guuritaanka iPhoto Library dhamaystiran.
Fiiro gaar ah: Haddii la tirtiro maktabadda jir ah drive computer ee adag ka dhigaysa aad walwalsan, aad gurmad iPhoto in CD / DVD adigoo gujinaya kartaan Share Guba ka hor inta aadan wax masixi.
Badan oo ku saabsan Guuritaanka iPhoto Library:
1. maktabadda thumbnail iPhoto kala duwan yihiin pre-iPhoto '08 iyo post-iPhoto '08. Maktabadda iPhoto ee iPhoto '08 ama ka dib waxaa lagu magacaabaa xirmo. Hoos ka eeg:
2. Waxa kale oo aad yaabaa dhaqaaqo maktabadda iPhoto in drive dibadda adag tahay gurmad ujeedada.
3. dhaqaaq, tirtirto, magaca, ama la bedelo faylasha ama galalka ee folder iPhoto Library laga yaabaa in aad awood u lahayn in aad sawirrada ka aragto. Si slove dhibaatadan, aad u soo celin kartaa maktabadda gurmad iPhoto (haddii kalana), ama badal, in mid ka mid ah asalka dib.
4.There ayaa sidoo kale codsiyada si ay u caawiyaan aad guurto iPhoto Library si ammaan ah, sida iPhotoLibraryManager ama iPhotoBuddy.
PC in Transfer File iPad: Music Transfer, Videos, Photos si fudud loo iPad
> Resource > Transfer > Sida loo dhaqaaq iPhoto Library in Location New a / Computer